ဒါဒို့လယ် .. ဒါဒို့လယ် … ဒို့ ….ပိုင်တဲ့ လယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Poetry » ဒါဒို့လယ် .. ဒါဒို့လယ် … ဒို့ ….ပိုင်တဲ့ လယ်
ဒါဒို့လယ် .. ဒါဒို့လယ် … ဒို့ ….ပိုင်တဲ့ လယ်
Posted by ရာမည on Mar 7, 2014 in Poetry | 39 comments
LT/ ဂေဇက်ရွာ ထွန်တုံးတိုက်ပွဲ
^^^ ဒါဒို့လယ် .. ဒါဒို့လယ် … ဒို့ … ပိုင်တဲ့လယ် ^^^
လယ်ထွန်တတ်ဖို့ အဓိကပါ အဖေ ……
ခေါင်းခေါက်ရွေးမှာပေါ့ အဖေ ………
လယ် ကောင်းဖို့ အထွက်တိုးဖို့
လယ် ထွန်သူ ဘယ်လိုစွမ်းသလဲ
လယ် ထဲက ဝဲလ်ကမ်းပါအဖေ …………
အထောင်းညက်ဖို့ လိုတယ်အဖေ ………
သမီးဆောင်ထားပြီ အဖေ …………။
နှစ်သီး သုံးသီး တင်ပါလို့
သီးထပ် သီးညှပ်ပါ စိုက်မယ်အဖေ
မြစ်ရေတင် စီမံကိန်းကြီး ရှိတယ်လေ
အ တဲ့ ကောင်မလေးတွေထက်……………
ကိုယ့်ကိုယ်ကို လည်လှပြီထင်တဲ့ ကလေးမလေးတွေ ကိုတော့ သနားတယ်။
အ တဲ့သူက တစ်ခုထက်ပိုပြီး ဘာမှ အစမ်းမထွင်တတ်ဘူးးး
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်လှပြီထင်တဲ့ ကလေးမတွေက အကုန် ကစားချင်တတ်တယ်။
ပို့(စ) နဲ့ ဆိုင်တာမဆိုင်တာမသိ၊ စိတ်ထဲ ပေါ်လာတာပြောတာ။
ဟီ ဟိ ဘာတွေ မန့်မိတယ် မသိဘူး…
ဗလငါးတန် တဲ့ ဟီဟိ
ဗလငါးတန်ဆိုတော့ ငါးယောက်လားဟင် ကျောက်စ်
နေလာနှင်းပျောက်ရင်သောကရောက်ရမည့် ကျောက်စ် ပါ ခီညာ
ဘ၀တသက်တာ.. လက်တွဲဖို့.. ယောကျာ်းတွေလက်ထပ်ယူမှာက..အပျိုအစစ်မဟုတ်..။
မိနစ်သုံးဆယ်လောက်ပဲကျုံ့သွားတတ်ပြီး. စွဲသုံးရင်ကျားရော/မရောမှာ.. အင်ဖက်ရှင်ရှိတာမို့.. မသုံးသင့်ကြောင်းရေးထားတာ..
သုံးရင်လည်း ကျောက်ချဉ်ရည်ထဲ.. ဒီအတိုင်းစိမ်ထိုင်နေရတာမဟုတ်.။
ကျောက်ချဉ်အမှုန့်ကို.. ရေစပ်စပ်ဖျော်..။ လက်ညိုးမှာလူးပြီး.. အထဲထည့်..တပါတ်လှည့်၂ပါတ်လှည့်နဲ့…ဆေးလူးသလိုလူးရတာ..။
ယခုလို သေသေချာချာတိတိကျကျ အချိန်နဲ့တပြေးညီ ရှင်းပြပေးတာ
(မှတ်ထားကြနော် လက်ညှိုးနဲ့ လူးပြီးတပတ်လှည့် တဲ့ )
မော်ဒန် လယ်သမား ကဗျာပေါ့နော်
အို ဘာတွေလဲကွယ် ၊
ငဒို့ကတော့ ဘာဘာ ဘာမှ မသိပါဘူးကွယ် ၊
အော်..အော် အမေပေးတဲ့လယ်တစ်ကွက်အကြောင်းပြောနေကြသကိုးဗျ… :loll:
ဒေါက်တာသဂျီးပြောသလို“ မိနစ်သုံးဆယ်လောက်ပဲကျုံ့သွားတတ်ပြီး. စွဲသုံးရင်ကျားရော/မရောမှာ.. အင်ဖက်ရှင်ရှိတာမို့.. မသုံးသင့်ကြောင်းရေးထားတာ..”
လယ်ကွက်ကျယ်နေရင် ထွန်တုံး ကြီးကြီးနဲ့ထွန်ပေါ့ဟဲ့…. :loll:
အမေဒိက မှာက ထွန်တုံးကြီး တွေချည့်ပဲ ..
ဟီ ဟိ ဘာတွေ မန့်မိတယ် မသိဘူး…(ခွက်ဒစ်တူ ကျောက်စ်)
ဦးလေး ဦးကြိုက်မီးပြောတာလေး ဆက်ပါဦးခင်ဗျာ
ကြားဖူးတာကတော့ အပိုးအထပ် တဲ့
ကိုယ့်လယ် နဲ့ကိုယ် ဘယ်သူထွန်ထွန် လက်ခံတာ ကျုပ်တို့ အပူမဟုတ်တော့ဘူးဗျ။
ပြောလို့လည်း မရတာမို့ မပြောတာကောင်းတယ်။
အဲဒီလိုပဲ “လက်မထပ်ခင် အတူနေသင့်တယ်” (LT) လို့လည်း ဒီ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပြောမကောင်းဘူးးး။
အလုံးစုံ နားလည်သဘောမပေါက်ရင် ပြောသူကိုပဲ ဒေါသထွက်ကြမှာဆိုတော့လေ။
စာပဲဖတ်ဖတ် ဘာစွဲညာစွဲ ကင်းကင်းလေး
Open Heart လေးနဲ့ နားထောင်တာတို့ ဖတ်တာတို့လုပ်တာသာ အကောင်းဆုံးပေါ့နော့။
(အဲလေ) အဲလိုတွေချည်းသာဆို တဂျီး ကြိုက်တဲ့ ငြင်းခုန်ခြင်းအနုပညာဆိုတာဘယ်ပေါ်လာပါ့မလဲ။
အဲတော့ ကျုပ် ဘာမှ မပြောခဲ့ဖူးလို့ပဲ သဘောထားပေးပါ။
(ပြောချင်တာလည်း ပြောပြီး ပြီ ဆိုတော့လေ )
ယောင်္ကျား ဆိုတာမျိုးကတော့ ဒီလယ် ဘလဘွာကျဲမှာစိုးလို့ တွေ့ကရာထွန်တုံးနဲ့ မထွန်ပါနဲ့လို့သာ လယ်ပိုင်ရှင်တွေကို ပြောတာကိုးးးး
ကိုယ့်ထွန်တုံးလေးနဲ့ ထွန်ရမယ် ဆိုရင်တော့ ၂ သီး ၃ သီး စားချင်တဲ့ သူက များတာပေါ့။
လုပ်ချင်ရာ မလုပ်ကြပါနဲ့၊ ဖြစ်ချင်တိုင်း မဖြစ်ကြပါနဲ့ ၊ (မှတ်ချက်.. ငါနဲ့က လွဲရင်) ဆိုတဲ့ သကောင့်သား များသမို့ ပြောတာပါ။
မိန်းကလေးတွေကို ဆင်ခြင်ရင်လည်း အရှင်း ဆင်ခြင်စေချင်တာပါပဲ။ လက်ထပ်ပြီးမှ လယ်ထွန်ကြပါ။
ဟီ ဟိ ဘာတွေ မန့်မိတယ် မသိဘူး…(ခွက်ဒစ်တူ ကျောက်စ)
အိုဘယ့် လယ်သမား ……
လေယူရာ သူ့မို့ တိမ်းရက်တယ်
ကျုံး လိုက်ပေါ့ တအား ……။
ဟ .. လူကြီးရ ..
ကျောက်ချဉ်နဲ့ လယ် နဲ့ ဘာဆိုင်လို့ဒုန်း …
မွန်းမံသင်တန်းပေးမယ် လေ ဆရာအံစာ
ဟိုးအောက်ဆုံးက ကျောက်ချဉ်ကျမှ သိတော့တယ်အေ…
ကျုပ်ကသမီးမွေးထားတော့.. တော့ကဗျာဖတ်ပြီး သမီးရှင် ဖင်ကျိမ်းရပါပေါ့လား…တော့. ကိုရင်ရာမည ရယ်….
ဒါနဲ.တော်မသိတဲ့အချက်ကို ကျုပ်ပြောရအုံးမယ် ကျောက်ချဉ်သုံးတာ ရေရှည်မကောင်းဘူးတော့.. ခိခိခိ
ခရီးသည်ကြီး နဲ့ ကိုထူးဆန်း ပို့ကို အရင်ဖတ်ကြည့်ပါခင်ဗျာ
မြန်မာတွေ ဥပမာ ခိုင်းနှိုင်းတာတော်ပုံများ.. သများဖြင့် ဘယ်လိုမှယှဉ်တွဲခိုင်းနှိုင်းလို့မရ :((
အထက်က လင့် နဲ့ ဆရာမဝင့်ပြုံးမြင့်ရဲ့
ကနာစီးမိဂီနဲ့ ငါးစိမ်းသည်ဗားရှင်း ကိုတွဲဖတ်ပါခင်ဗျာ ။
မဟာသံဝါသနေ့ ရိုက်စားကောက်ထည့် နှင့် သူကြီးသို့ပေးစာ ကိုဆက်ဖတ်ပါ ။
ပြီးရင် ကိုထူးဆန်းရဲ့ ကိုယ့်အတွေးနဲ့က်ုယ် ကိုဖတ်ပါ
သဘောပေါက်သူများကတော့ ခွိခွိ ခွိခွိ ကျိတ်ရယ်ကြပါတယ် တဲ့
အဟုတ်ပါ့ ခွစ်ရယ်။ ဘယ်လိုမှ ယှဉ်တွဲခိုင်းနှိုင်းလို့မရ။
အူးလေးရေ … အူးလေးရာမည
သမီးထင်တာကတော့ လယ်သမားနဲ့ ခိုင်းနွား ဥပမာ ဆိုရင် နီးစပ်နိုင်ကောင်းပါရဲ့။ လယ်သမားဟာ သူ့လယ်ကို ထွန်ဖို့အတွက် ခိုင်းနွားကောင်းကောင်းရှာရမယ်။ တန်ကြေးကလည်း ကြီးတော့ အမှားအယွင်းကလည်း မခံနိုင်ဘူး။ တော်ကြာ ဂျိုကျိုး နားရွက်ပဲ့ ဖြစ်နေရင် ဘယ်လိုလုပ်မတုန်း။ ဒါကြောင့် သေချာစစ်ဆေးဖို့လိုတယ်။ တစ်ပွဲတိုးမလုပ်နိုင်ဘူး။ ခိုင်းနွားကြီးကို ချော့တစ်လှည့် ကြိမ်းတစ်လှည့်နဲ့ သေချာခိုင်းစားနိုင်မှ လယ်သမားရဲ့ ဘ၀အနေအထားကလည်း ပြေလည်မှာကိုး။ အဲလို ဥပမာလေးဆိုရင် ခွစ် ဘယ်လိုသဘောရလဲ။
ဂစ် ဂစ် ဂစ်
ဆရာမပြုံး အန်တီပြုံး အစ်မကြီးပြုံး ကြီးတော်ပြူံး အဖွားလေးပြုံး … ! ဟင် မှတ်ပြီလား
သားသားပြောတာ အရပ်စကားလမ်းဘေးစကားပါကွယ် အန်တီလည်း ပေါက်ပါရဲ့နဲ့
အန်တီ စကားလှလှနဲ့ မန့်သွားတာလေး သဘောကျပါတယ်ဗျာ
သားသားတို့ မဟာပုရိသတွေ နွာတွေဖြစ်ကုန်ပြီဗျ
သည်းခံ တကာ …သည်းခံ ..
အောက်က ဆြာ ကလည်း စွပ်စွဲ လိုက်ပါတယ် .. သူဂျီး ဂေဇက် ပရိုမိုးရှင်းတွက်တဲ့ ..
ခုခွိ ခုခွိ ..
ကွန်မန့်ပေးသူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ တကယ်တော့ အပေါ်က ညွှန်းထားတဲ့ ပို့စ်တွေ အားလုံးဟာ သဂျီးဇုတ် ခေါ် သဂျီးခိုင်ရဲ့ မန်းဂေဇက် စပယ်ရှယ် ပရိုမိုးရှင်းအတွက် ရေးတင်ထားတဲ့ ပို့စ်များ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်ရောက် ငြင်းခုန်သူတွေ များလာပြီး လူဝင် များစေရေး အတွက်ပါ။ သူက အမှန်တော့ အက်ဆီးဒင့်လို ဖြစ်ပြီး လူတွေ အုံနေရင် သိပ်ကြိုက်ပါတယ်။ သူ့ကို ဝေဖန်တဲ့ အက်ဆီးဒင့် ဆိုရင်တော့ သိပ်မကြိုက်ပါ။ မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ ကွန်မန့်တွေ များလာတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလို များစေဖို့ အတွက်လည်း သူကိုယ်တိုင် ပေါက်ပန်းလေးဆယ်တွေ ဝင်ပြောပြီး ဆွပေးထားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးအတွက် အင်ဖောင်မေးရှင်းကတော့ ရှေ့လထဲမှာ မန်းဂေဇက်အတွက် သဂျီးခိုင်ကိုယ်တိုင် သရုပ်ဆောင်ပြီး ကြော်ငြာ ရိုက်ဖို့တောင် စီစဉ်ထားပါတယ်။ ဇတ်ညွှန်းတောင် ရေးထားပြီးပါပြီ။ ဇတ်ညွှန်းလေးကတော့ ဒီလိုပါ။ မန်းဂေဇက်လို့ ဆိုင်းဘုတ်တပ်ထားတဲ့ လယ်ကွက်လေးထဲကို ရှေ့ဆုံးကနေ သဂျီးခိုင်က ပိုးကောင်ကြီးပုံစံ ဝတ်ပြီး ခုန်ဆွ ခုန်ဆွနဲ့ ဝင်လာပါမယ်။ အားလုံး မျက်စိထဲမှာ မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ နောက်ကနေ သူ့ဘော်ဘော် လစ်ဘရယ်ဒီမိုလို့ အော်တတ်တဲ့ လေး ငါးယောက်ကလည်း အဲဒီလို ပိုးကောင်တွေပုံစံနဲ့ ခုန်ဆွ ခုန်ဆွ ဝင်လာပါမယ်။ အဲဒီအချိန် နောက်ခံ တီးလုံးလေးကတော့ “ပိုးကောင် ပိုးကောင် အားလုံးစားတဲ့ ပိုးကောင် မားခိုင်တို့ဟာ အရွက်ရော အရိုးရော ကိုက်မယ့်ပိုး” ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီသီချင်းကို သဂျီးခိုင်နဲ့ သူ့ဘော်ဘော်များက လယ်ကွက်ထဲမှာ ဆိုပြီး ပိုးကောင်ဒန့်စ်ကတဲ့ အခန်းပါ။ အဲဒီမှာ သူတို့ကို ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းပြီး နှိမ်နှင်းမယ့် လယ်သမားကြီး နေရာက သရုပ်ဆောင်မယ့် သရုပ်ဆောင် လိုနေပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်လိုသူများ စာရင်းပေးနိုင်ပါပြီ။
အပေါ်က ပို့စ်များအတွက် အတည် ဆွေးနွေးလိုသူများကို ပြောရရင်တော့ အတွေးအခေါ်မှာ အရေးအလွန်ကြီးတဲ့ ကီးဖြစ်တဲ့ အချက် ရှိပါတယ်။ ဒီ အတွေးအခေါ်မှာလည်း အဲဒီ ကီးရှိတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲဒါကို ဘယ်သူမှ ဇောင်းပေးပြီး ပြောတာ မတွေ့ပါဘူး။ အမှန်တော့ ခရီးသည်ကြီးနဲ့ တချို့လူတွေ ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမှ အလေးပေးပြီး ပြောမသွားလို့ အဲဒါက မပေါ်လွင်သလို ဖြစ်နေပါတယ်။
တကယ်လို့ နောက်တလလောက်နေမှ ဆွေးနွေးချင်ရင်တော့ ပြောပါ။ ကျနော် တကယ် ရေးပေးနိုင်ပါတယ်။ အခုတော့ ကျနော် မအားသေးပါ ခင်ဗျာ။ နောက်တခုက သဂျီး အသံပေးတိုင်း ထကြည့်ရင် ပင်ပန်းပါတယ်။ အမှန်တော့ လူဖတ်အောင်ရေးမယ့် စာရေးသူ ဆိုတာ မူတခုကို ကိုင်ပြီး အဲဒီအတိုင်း ရေးရပါတယ်။ သူဖြူရင် ငါမည်းမယ်ဆိုပြီး ငြင်းနေလို့ မရပါဘူး။
အမှန်တော့ သဂျီးဇုတ်ကို ကြိုးရှည်ရှည်နဲ့ လှန်ထားပြီး သူမေ့လောက်ရှိမှ ဆောင့်ဆွဲ သူလည်း ပိုးလိုးပက်လက်လဲ အဲဒီလို လုပ်တာ ပိုကောင်းပါတယ် ခင်ဗျာ။
ဦးစံလှကြီးရေးမည့် ပို့စ်ကို ဖတ်ချင်လှပါပြီ
အင်း ခင်ဗျားပြောမှပဲ ကျုပ် စိတ်ပြောင်းသွားပြီ။ ကျုပ် ရေးလက်စ ဝတ္ထုကို ခဏရပ်ပြီး အဲဒါ အရင်ရေးကြည့်လိုက်မယ်။ သိပ်တော့မြန်မှာ မဟုတ်ဘူး ထင်တယ်။ အစီအစဉ် မရှိပဲ ကြားဖောက် ရေးရတာရယ် ကျနော်က ရေးရင်လည်း တတ်နိုင်သမျှ သိုင်းသိုင်းဝိုင်းဝိုင်းနဲ့ ဖတ်တဲ့လူက ဖတ်ပြီးတာနဲ့ ဘဝင်ကျသွားတာမျိုးပဲ လိုချင်တယ်။
အင်း လယ် ကွက် ထွန် ဘို့ လူ ရွေး တာ ဟုတ် တယ်
တစ် ယောက် စိ တ် တိုင်း မ ကျ ပယ် လို က်
နောက် တစ် ယောက် ပယ် လိုက် နဲ့
သေ ချာ မ ရွေး ပဲ ပယ် နေ ရင်း က
နောက်ဆုံး တော့ က က စာရင်း ၀င် သွား မှာ မြင် ယောင် မိ သေး ဗျာ